अंग्रेजी कमजोर छ ? यसरी सुधार्नुस् !
काठमाडौं, २६ असोज — आजकल अंग्रेजीको ज्ञान हुनु आवश्यक छ । अंग्रेजी जान्दा प्रविधिमा पनि सजिलो हुन्छ र विश्वको धेरै कुराको ज्ञान पाइन्छ । अनि अंग्रेजी जान्ने मान्छेलाई सितिमिति कसैले हेप्दैनन् ।
तपाईंको अंग्रेजी कमजोर छ भने नआत्तिनुस् । यो सिक्न सजिलो छ । सामान्य कुराहरूमा विचार पु–याउनुभयो भने तपाईं बिस्तारै खरर अंग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ ।
काल र क्रियाको ज्ञान
अंग्रेजीमा वाकय बनाउनका लागि तपाईंले सही कालका साथ क्रियाहरूको हेक्का राख्नुपर्छ । भूत, भविष्य र वर्तमान कालको सही जानकारी हुँदा तपाईंले शुद्ध वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ ।
अंग्रेजी व्याकरण पढ्नुस्
काल जानेर मात्र पुग्दैन । अंग्रेजी व्याकरणको पुस्तक अध्ययन गर्नुपर्छ । माइकल स्वानको प्य्राक्टिकल इंग्लिश युसेज अंग्रेजी व्याकरण सिकाउने सबभन्दा राम्रो किताब हो । नियमित रूपमा व्याकरण पढ्नुस् ।
आफ्ना नजिकका साथीहरूसँग अंग्रेजी बोल्न थाल्नुभयो भने आफ्ना कमजोरीहरू थाहा लाग्छ । टुटफुट अंग्रेजी बोल्दाबोल्दै तपाईंमा आत्मविश्वास उत्पन्न हुन्छ र भाषामा पकड बलियो हुन्छ ।
अंग्रेजी अंग्रेजी शब्दकोश र अंग्रेजी नेपाली शब्दकोश घरमा राख्नुस् । यसले तपाईंलाई प्रत्येक शब्दको अर्थ बताइदिन्छ । त्यो शब्दलाई कहाँ प्रयोग गर्ने ज्ञान पनि तपाईंलाई हुन्छ । दिनको १० शब्द सिक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुस् ।
अंग्रेजी राम्रो बनाउनका लागि ट्युसन वा कोचिङ क्लास लिइरहनुपर्दैन । युट्युबमा उपलब्ध अनेकौं भिडियोहरूबाट तपाईंले सहायता लिन सक्नुहुनेछ ।
आजकल प्रविधिको युग हो । अंग्रेजी सिक्ने अनेकौं एपहरू पाइन्छन् । सित्तैमा पाइने यस्ता एपहरूको सहायताले तपाईं अंग्रेजी सिक्न सक्नुहुन्छ । डाउनलोड गरिहाल्नुस् ।
अंग्रेजी राम्रो बनाउनका लागि नियमित रूपमा अंग्रेजी पत्रिकाहरू पढ्ने गर्नुस् । त्यसबाट तपाईंलाई वाक्य बनाउने तरिका थाहा हुन्छ र शब्दावली पनि बलियो हुन्छ ।
मानिसले धेरै कुरा सुनेर पनि सिक्छ । अंग्रेजी सुधार्नुछ भने अंग्रेजी फिल्म वा टीभी सिरियल हेर्ने गर्नुस् । खेलकुद हेर्नुहुन्छ भने अंग्रेजीमा गरिएका कमेन्ट्री सुन्ने गर्नुस् ।
अंग्रेजी सिकाउने किताबहरू बजारमा पाइन्छन् । –यापिडेक्स इंग्लिश स्पीकिङ कोर्सजस्ता किताबहरू पढ्नुभयो भने अंग्रेजी राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ ।
आफैंमाथि विश्वास राख्नुस्
बोल्दा अलिअलि गल्ती हुन्छ । आत्तिएर बोल्नै छाड्ने नगर्नुस् । एकदुईचोटि गल्ती हुन्छ तर तपाईंभित्र बिस्तारै आत्मविश्वास पलाउँदै जान्छ र अंग्रेजी सुध्रिन्छ ।
असोज २६, २०७४ मा प्रकाशित
उत्तर र दक्षिण कोरियाको मिलनमा अमेरिकाको के काम ? काठमाडौं — दुई कोरियाली देशका नेताले अघिल्लो हप्ता उक्त प्रायद्वीपको सबभन्दा अग्लो पहाडको चुचुरोमा पुगेर हात मिलाए अनि शान्तिका लागि एकताबद्ध हुने प्रतिज्ञा गरे । अब वाशिङटनसँग त्यो श...
शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकको थप २ शाखा विस्तार
भोलिदेखि दशैंका लागि टिकट बुकिङ खुल्ने
प्रदेश सरकारका मन्त्रीको मूल्यांकन चाँडै हुन्छ : नेकपा प्रदेश इन्चार्ज रावल
लभ स्टेसनको शुभसाइत
कोटेश्वरको जामले हैरान हुनुहुन्छ ? जाम छल्न तिहारअघि नै बेलिब्रिज सञ्चालनमा आउने